အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊ အပေါင်းသုံး စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးများနှင့် မဲခေါင်-ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပ
Post on 13 September 2021
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး သည် ယနေ့နံနက် ၇:၀၀ နာရီမှ စတင်၍ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ -ကိုရီးယား စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၃) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင် - ဂျပန် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ-ဆွစ်ဇာလန် Troika စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၂၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အပေါင်းသုံး စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတို့ကို နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးများသို့ အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့မှ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အာဆီယံ-မဲခေါင် အတွင်းရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
(၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို နံနက် ၇:၀၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအဝေး သဘာပတိများအဖြစ် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wang Wentao တို့က ပူးတွဲ သဘာပတိများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများကို ကုစားနိုင်ရန်အတွက် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်၊ အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေ၊ အာဆီယံ-တရုတ် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများ၊ အာဆီယံ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုများကို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ဆေးကိရိယာ များ လှူဒါန်းမှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုကွင်းဆက်များ ပိုမိုခိုင်မာစေရေးအတွက် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအား ပုံမှန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရေး အထူးသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် အဓိက ကျသည့် ရွှေလီနှင့် မူဆယ်ဂိတ်များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို စဉ်းစားပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံအား မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း၊ အာဆီယံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ကာလကြာရှည်စွာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိခဲ့သည့်အတွက် အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ် ထပ်မံ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အလားအလာရှိသည့် နယ်ပယ်များ သတ်မှတ်နိုင်ရန် ပူးတွဲဖြစ်နိုင်ချေ လေ့လာဆန်းစစ်မှု ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စအပေါ် ထောက်ခံပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး၌ ဝန်ကြီးများက နှစ် (၃၀) ပြည့် အာဆီယံ-တရုတ် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဆီယံ နှင့် တရုတ်စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ပူးတွဲကြေညာချက်နှင့် (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်း အဝေး ပူးတွဲကြေညာချက်တို့ကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ (၁၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်း အဝေးကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Yeo Han-koo တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများ အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှု များနှင့် ရှေ့ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နယ်ပယ်များ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူ စာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းများ တိုးတက်မှု အခြေအနေ တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများ၊ ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေကို မျှဝေခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ၊ အာဆီယံ ဘက်စုံ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမူဘောင်နှင့် ဂျီအမ်အက်စ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးပြန်လည် ဦးမော့စေရေး စီမံချက်ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပထမဦးစွာ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံစုံကုန်သွယ်ရေးစနစ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူချောမွေ့ စေခြင်းနှင့် ဖြေလျှော့မှုများမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဒုတိယအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် အားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ တတိယအနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှု အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေရန် လိုအပ် ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဝန်ကြီးများက (၁၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ပူးတွဲ ကြေညာချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၁၃) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်−ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ရာ လာအိုနိုင်ငံ၊ စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Khampheng Saysompheng နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Hiroshi Kajiyama တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်း အဝေးတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၏ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များ၊ မဲခေါင် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မျှော်မှန်းချက် ၂.၀ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အောက်မှ လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေ အနေနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံက အဆိုပြုလာသည့် စီမံကိန်းများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကူညီ ပံ့ပိုးပေးမှုအပေါ် များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ညီမျှစေရန်အတွက် မဲခေါင် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမျှော်မှန်းချက် ၂.၀ သည် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိနေသဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အောက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်း၏ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများအပေါ် ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အဆိုပြုထားသည့် ဒီဂျစ်တယ် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများကို ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အရှေ့-အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းများအပေါ် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးစေလို ကြောင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေပြု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များ ပံ့ပိုးပေးစေလိုကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အာဆီယံ-ဆွစ်ဇာလန် Troika စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဝန်ကြီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ စီးပွားရေးရာ၊ ပညာရေးနှင့် သုတေသနဌာန အကြီးအကဲနှင့် Swiss Confederation ၏ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Guy Parmelin တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံနှင့် ဥရောပ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက် (မူကြမ်း)နှင့် အာဆီယံနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့အကြား လက်တွေ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များ (၂၀၂၂-၂၀၂၆)အောက်ရှိ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အမြင် ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပူးတွဲကြေညာချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ (၂၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအပေါင်းသုံး စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဘရူနိုင်း နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဝန်ကြီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah ၊ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး H.E. Wentao Wang၊ ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Hiroshi Kajiyama နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင် ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Dr. Yoonjong Chun တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအပေါင်းသုံး စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) အပေါ် ဝန်ကြီးများက ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြပြီး ကိုဗစ်- ၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းစေရေး အာဆီယံအပေါင်းသုံး လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊ အပေါင်းသုံး စီးပ...
ကိုဗစ်-၁၉ သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသော ငါး၊ ပုဇွန် မွေးမြူရေး အပါအဝင် မွ...
Post on 11 September 2021
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လ...
(၁၃) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်...
Post on 10 September 2021
(၅၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ နှင့် အာဆီယံထောက...
Post on 09 September 2021
(၅၃)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံလ...
Post on 08 September 2021
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်...
(၅၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေများ အက...
Post on 07 September 2021
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ...
Post on 01 September 2021
Post on 31 August 2021